Meksika : Fankalazana ny faha 100 taonan’i Cantinflas · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2011 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, Aymara, English
Ity volana Aogositra ity i Meksika no mankalaza ny zato taona nahaterahan'i Mario Moreno mpanao hatsikana, diso fantatra amin'ny hoe Cantinflas . Any Meksika, ary manerana an'i Amerika Latina, Cantinflas dia fantatra ho mpilalao lehibe ary iray amin'ireo mpilalao hatsikana tena be mpitia indrindra any Meksika.
Taranaka maro nifandimby, ankizy sy olon-dehibe no niara-nihomehy tamin'ireo sarimihetsiny, tamin'ny fahitalavitra sy hatsikana. Indray andro tsy hafa fa ilay Amerikana mpilalao hatsikana Charles Chaplin tenany mihitsy no niantso azy hoe “ilay mpilalao hatsikana velona”
Ao amin'ny Cuéntame, ilay bilaogera Axel Caballero dia manomboka ny lahatsorany mikasika ny lanjan'i Cantinflas tamin'ny fahatsiarovan'ny fahazazàny.
Ilay bilaogera SotoHoyos ho an'ny El Antagonista dia maneho hevitra momba ny lanjan'ny fankalazana [es] ilay fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Cantinflas :
Ao amin'ny bilaogin'ny Los Angeles Times, La Plaza, Ken Ellingwood dia manambara ilay hetsika ara-kolotsaina atao any Meksika :
Ny ambiny sisa amin'ny volana Aogositra, ilay mpampihomehy nodimandry […] no ho ivon'ny fampiratiana, lahatsary fahatsiarovana, famelabelarana ary koa dihy ho fanomezam-boninahitra azy. Manaraka ny aloky ny hazon'ny Paseo de la Reforma, fampisehoana an-kalamanjana sary mainty sy fotsy nalehibeazina ary peta-drindrinà lahatsary miloko no maneho ny fomba nanampian'i Cantinflas nandrafitra ny fotoana volamenan'ny sarimihetsika Meksikana :
Anatin'io lahatsoratra io ihany izy dia milaza ny lanjan'i Cantinflas any amin'ny kontinanta hafa :
Tao amin'ny YouTube, AlJazeera amin'ny teny Anglisy dia nampiditra lahatsary iray momba an'i Cantinflas sy ny fankalazàna mitranga ao Meksika, ary TeleSur nampakatra misy dikanteny amin'ny teny Anglisy ny tatitra nataon'izy ireo momba ny fitsingerenan'ny faha 100 taonan'ilay mpanao hatsikana.